health – hamrosajhaonline
क्षयरोगीको खकार, रिपोर्ट र औषधिको ढुवानीका लागि ड्रोन सञ्चालन
प्युठान २० जेठ । संकास्पद क्षयरोगीको खकारको नमुना प्रयोगशालासम्म पुर्याउन नेपालमै पहिलो पटक ड्रोन प्रविधिकिो प्रयोग गरिएको छ । प्युठान जिल्लामा क्षयरोग शिघ्र निदान र उपचारका लागि दुईवटा ड्रोनको प्रयोग गरिएको हो । निक साइमन फाउन्डेशनको आर्थिक तथा लिभरपुल स्कुल अफ ट्रोपिकल मेडिसिन र स्टोनी ब्रुक युनिभर्सिटीको प्राविधिक सहयोगमा बिराटContinue Reading
एक पटक सम्झनुस त तपाईँ पछिल्लो पटक कहिले मुस्कुराउनुभएको थियो ? सम्झनु भयो ??? कन्फ्युज हुनु भयो होला । किनकी तपाँई हाम्रो व्यस्तता यति बढ्यो की हामीले के गरेका थियौ र के गर्दै छौँ भन्ने पनि झट्ट सम्झन सक्दैनौँ । कतिखेर को संग मुस्कुराएका थियौँ वा थिएनौँ पत्तै पराउदैनौँ ।Continue Reading
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २/३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमाContinue Reading
सीधै नपिउँनुस् फ्रिजको चिसो पानी
गर्मीको समयमा मानिसहरू प्राय: फ्रिजको चिसो पानी पिउन मन पराउँछन् । तर, फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा शरीरलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार धेरै चिसो पानीले मुटुलाई पनि असर गर्दछ र मुटुको धड्कन पनि कम गराउन सक्छ । फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा यस्तो हुनसक्छ : वजन बढाउँछ : खाना खानेबित्तिकै चिसोContinue Reading
– दाँत स्वास्थ्य एवं सुन्दरता दुवैका हिसाबले महत्वपूर्ण छ । – दाँतलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न यसको नियमित हेरचाह जरुरी छ । – दाँतलाई सुन्दर राख्न खानापछि दिनमा दुईपटक राम्रो एवं गुणस्तरीय टुथपेस्टले ब्रस गर्नुपर्छ । – समय–समयमा दाँतको परीक्षण गराउनुपर्छ । – छ महिनामा एकपटक दाँत स्केलिङ गराउनु उपयुक्तContinue Reading
डन्डीफोर आउने कारण? जोगिने कसरी ?
छालामा हुने एक विशेष प्रकारको तैलीय ग्रन्थिका कारण अनुहारमा डन्डिफोर आउँछ । यो ग्रन्थिले एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ पैदा गर्छ र छालालाई प्राकृतिक रूपमै कोमल राख्न सहयोग गर्छ । युवा अवस्थामा हर्मोनमा हुने असन्तुलनले छालामा हुने तैलीय ग्रन्थिलाई उत्तेजित पारिदिन्छ । जसलाई बढी प्रभाव पार्छ, उसैलाई बढी डन्डिफोरले सताउँछ ।Continue Reading
किन निदाउँछ खुट्टा ?
तपाईँले पक्कैपनि कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने अवस्थाको महसुस गरेको हुनुहुन्छ होला । एकैठाँउमा नचलिकन बस्दा वा खुट्टा खुम्च्याएर बस्दा प्राय खुट्टा निदाउने गरेको पाइन्छ । खुट्टा भारी भएजस्तो हुने, स्पर्श अनुभव गर्न नसक्ने, झन्झनाहट हुने अवस्थालाई खुट्टा निदाएको भनिन्छ । खुट्टामा दवाव पर्न जाँदाContinue Reading
भिटामिन सीको सर्वोत्तम स्रोत मानिने अमलामा तीन सुन्तला बराबर भिटामिन सी एक अमलामा हुन्छ । अमलालाई आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसमा गालिक एसिड, टान्निुक एसिड, सेलुलोज, क्याल्सियम, अल्बुमिन जस्ता रसायनिक तत्व पाइन्छ । यसलाई अचार तथा बिभिन्न किसिमका मिठाइहरु बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ । आउनुस् हेरौं यसका फाइहरुContinue Reading
निन्द्राका खराबी सय थरि ?
संसारमा करीव १०० प्रकारका निन्द्रा सम्बन्धी खराबीहरु भेटिएका छन् । हामीमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशतहरुले जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा निन्द्रा नलाग्ने समस्याले पिडित भएका हुन्छौं । हामी मध्ये कतिलाई निन्द्राको बारेमा थाहै नहोला । एक स्वस्थ मानिसलाई विस्तारामा पल्टेपछि १० देखि १५ मिनेट सम्ममा निन्द्रा लाग्छ र करीव ७ देखिContinue Reading